The Gardener: နှာစေးနေသောယုန်များစုဝေးနေထိုင်ရာမှ .... နှာစေးနေသော ယဉ်ကျေးမှုထွန်ကားလာခြင်း။
နှာစေးနေသောယုန်များစုဝေးနေထိုင်ရာမှ .... နှာစေးနေသော ယဉ်ကျေးမှုထွန်ကားလာခြင်း။
ထိုအယူသည် ကျွန်ုပ် အကောက်အယူလွဲရာမှ စတင်ပြီး ယုံကြည်စရာကောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။
ပထမဆုံး အမြင်ကတ်မိသည်မှာ ပရိုင်းမိတ်များဖြစ်သည်။ သစ်ပင်ပေါ်တွင် အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်ရက်သားနှင့် လမ်းလျှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့၍ဖြစ်သည်။ ပရိုင်းမိတ်နှင့်မျောက် မကွဲသူများအတွက် နည်းနည်းရှင်းပြလိုပါသည်။ ပရိုင်းမိတ်များသည်မျောက်မဟုတ်ပါ။ လူဖြစ်လာမည့် လူခါနီး သတ္တ၀ါများသာဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံမှ မျောက်တစ်ကောင် လူဖြစ်သွားလေမလား ဆိုသည်မှာ အတော်လေးရူးသော မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ... နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား အယူအဆလောက်နီးနီး ရူးသည်ဟု ထင်မိသည်။ မျောက်သည်မျောက်ပဲဖြစ်သည်။ နောက် နှစ်ပေါင်း နှစ်သန်းခြောက်သောင်းကြာသည့်တိုင် မျောက်သည် ဆော့ခရေတ္တိမဖြစ်လာနိုင်ပါ။ ... လူနားတွင်နေထိုင်သောမျောက်များသည်ပင်လျှင် စာရေးစာဖတ်တတ်လာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အစဉ်အလာများသည် သတ်မှတ်ထားရှိပြီးသား နိယာမ တရားဖြစ်လာတတ်သည်။ မျောက်တစ်ကောင် အလွန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်သည်မှာ လူရိပ်လူကဲနားလည်သော မျောက်တစ်ကောင်မျှသာဖြစ်သည်။
Evolution ၏ ဖခင်ကြီးမှာ ဒါဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် ဒါဝင် ၀ါဒကိုလည်း နည်းနည်းလေးနားလည်ရန်လိုသည်။ ဒါဝင်သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံသည့်အတွက် ထာဝရဘုရားဝါဒကို လက်ခံ၍မရသည့် သိပ္ပံ အယူဝါဒဘက်သို့ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်သည်။ ထာဝရ ဘုရား၏ မုတ်ဆိတ်ဖြူများကို မီးနဲ့ရှို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဒါဝင်၏ အယူအရဆိုလျှင် ထာဝရဘုရားဖြစ်လာမည့် ပရိုင်းမိတ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့မှ ထာဝရဘုရားရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိသမျှ အရိုးများတွင်လည်း ဒိုင်နိုဆောလောက် အရပ်ရှည်သူများမတွေ့ရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အသက်ရှည်ရာမှ တိုလာ၊ အရပ်ရှည်ရာမှာ ပုလာသော ကျမ်းများ၏ အဆိုသည်လည်း ဒါဝင်နှင့်မဖြစ်ပါ။ သက်တစ်သောင်းတမ်းမှ လူ၏ နှလုံးသည် သက်တစ်သောင်းတမ်းလုံးခုန်နေနိုင်ရန် သံမဏိအမာစားဖြင့် လုပ်ထားရန်လိုသည်။ ထိုကြောင့် အနည်းငယ်သော ဗဟုသုတသည် အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ အထူးသဖြင့် မျောက်တစ်ကောင်အတွက် ပြို့ပီးအန္တရာယ်ကြီးပါသည်။
သူတော်ချင်း သီတင်းလွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ ချိတ်ချင်းချိတ်မိသည်ဖြစ်စေ .... အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်လာသည်။
အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုတွင် အယူအဆရှိလာသည်။ အတွေးအခေါ်ရှိလာသည်။ ဘုံယုံကြည်ချက်များရှိလာသည်။ အလျော့ပေးနယ်နိမိတ်များ၊ နားလည်မှုများရှိလာသည်။ ... မကြာခဏ အငြင်းအခုံရှိလာသည်။ ဆွေးနွေးကြသည်။ တန်ဖိုးများထားရှိလာကြသည်။ လေးစားစွာ အယူအဆတစ်ခုကို တင်ပြသည်။ ခိုင်ခိုင်မာမာကန့်ကွက်သည်။ ထိုအရာများသည် မျောက်များနှင့် သိပ်မပတ်သက်သော လူ့ကိစ္စများဖြစ်ပါသည်။ မျောက်တိုင်းပြည်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံမရှိလည်းဖြစ်သည်။ သန်းရှာနေရုံမျှဖြင့် ဘ၀ကို အေးအေးလေးဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ မျောက်မက Lesbian ဖြစ်နေလျှင် မျောက်မထားနိုင်သေးသည်။ အသက်ကြီးလာသော မျောက်အိုကြီးများအနေဖြင့် မီးလောင်ပြင်တွင်သွား၍ နန္ဒမင်းသားကို တရားပြနိုင်သေးသည်။ မျောက်လက် မောင်းအပ်ဟူသော စကားပုံတွင်လည်း အခန့်သား ၀င်ခမ်းနားနေနိုင်သေးသည်။ မျောက်မူးလဲသေဟူသော မျောက်လွှဲကျော်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြနိုင်သေးသည်။ မျောက်စိတ်ဟုပြောရလောက်အောင် အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်ပြောနိုင်သေးသည်။ ဘုရားကားအောက် မျောက်ကားအထက် ဆိုသည့် ဇာတ်ကွက်ကို သရုပ်ဖော်နိုင်သေးသည်။ နေလုံးကို မျိုချမိသော ဟာနုမာန်လိုလို၊ ၀ူခုန်းလိုမျောက်စွမ်းကောင်းလိုလိုဟန်ဆောင်ရင်း မျောက်လောကကြီး ယိုယွင်းလာမှုကို အချိန်မီ အေးချမ်းအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆနိုင်သေးသည်။ မျောက်ဖြစ်ရခြင်းမှာ စိတ်နှလုံးဝမ်း ငြိမ်းချမ်းနေကြောင်း မကြာခဏ ကုတ်ကုတ်ပြနိုင်သေးသည်။ မျောက်အကြီးအကဲ၏ စေတနာသန့်သန့်ကြီးကို ခန့်ခန့်ကြီးထူတ်ဖော်ကြေငြာနိုင်သေးသည်။ အမြန်လုပ်ရန်တော့လိုသည်။ မကြာမီ စန့်စန့်ကြီးဖြစ်နေမှာစိုး၍ ဖြစ်သည်။
အမေး။ ။ဆင်က ဘာလို့အကောင်ကြီး၊ အညိုရောင်ရှိပြီး အတွန့်ပါတာလဲ။
အဖြေ။ ။ အရွယ်သေး၊ အဖြူရောင်ရှိပြီး၊ လုံးဝိုင်းရင်လည်း ဆင်ဘယ်ဟုတ်မလဲ .. အက်စပရင် ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
မျောက်တွေဟာ ပါတီမဖွဲ့ဘူး။လူတွေက ပါတီတွေဖွဲ့တယ်။ ပြိုင်ရင်းနဲ့ ကုတ်ကြမယ် .. ကိုက်ကြမယ် ...။ သိတာထက်ပိုပြောမယ် ...။ မစားပေမယ့် ၀စေရမယ်ဆိုတာတွေ အာဘောင်အာရင်းသန်မယ်။ ... စိတ်ရင်းက ရိုးသားလို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တာပါ ဆိုတဲ့ ဟာသတွေပြောမယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကို တွဲဖက် တွဲချက်စားမယ်။ ပညာရေးလောကကြီးကို ကယ်တင်ဖို့စူပါမင်းလိုလာမယ်။ နိုင်ငံကြီးကို ဆင်းရဲတွင်းလွတ်ကင်းအောင် လမ်းပြဆောင်ပါမည်လို့ဟစ်သူဟစ်မယ်။ ဘုရားလောင်း ခေတ်ထက် ပိုကောင်းစေရမည်လို့ ရဲရဲကြီး အာမခံကြမယ်။ အချင်းချင်း ချနင်းမယ် ..။ရည်းစားတွေလို တွဲမယ်၊ခွဲမယ်။။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရရှိတဲ့အခါ နေရာတိုင်းက ပဲခူးနဲ့စစ်ကိုင်း ... စိုင်းတိုင်းရောက်တယ် ...လှော်တိုင်းပေါက်တယ်။ ....မျောက်တွေက ပါတီမဖွဲ့ဘူး။ ပါတီတက်တယ်။ နွယ်ကြိုးလေးတွေခိုတယ်။ စုစုဝေးဝေးပြေးလွှားတယ် ...။ တခါတခါ ... ကြိုးခွေ ..ကြိုးခွေလို့ ကဗျာထဲဝင်အော်တယ်(ဌာနေပြည်ကြီးက ဝေးသနှင့် - ဦးကြင်ဥ)။ ... တစ်ခါတစ်လေ ...မျောက်အချင်းချင်း မြောက်ပန်းလှန်၊ ...တစ်ခါတစ်လေ ..ဆန်တောင်းဖို့ ရုပ်ထွက်ပြ၊ တစ်ခါတလေ ... မျောက်စွမ်းပြရာကနေ သစ်ကိုင်းလွတ် ....။ ဒါပေမယ့်လည်း မျောက်ကလည်း မျောက် dignity နဲ့ .. အရှင်ဒေ၀ဒတ်လောင်း ကျောက်ခဲနဲ့ထုသွားတဲ့ ဘုရားလောင်းမျောက်ထုံးကို နှလုံးမူနေသယောင်လုပ်ပြတတ်တယ်။ အဲဒီတစ်ခုတော့ မျောက်တွေကို လေးစားတယ် ....။ ပိရိတယ် ...သွေးအေးတယ်၊ မျောက်ငါးပိကိုင်သလို ဖြစ်တာက အရင်က ဥာဏ်နည်းတဲ့မျောက်တွေပါလို့တောင် ခပ်လေးလေး သံရှည်ဆွဲပြီး ရှင်းပြလိုက်သေးတယ်။ အာဂမျောက်။ (ဘယ်တော့မှ အက်စပရင်မဖြစ်စေရဘူး)
မျောက်တွေဟာ မျောက်မျဉ်းရင်း လူတွေကို အကဲခတ်တယ်။ .....
မျောက်တွေက မီးခဲမကိုင်တော့ဘူး ... ပါးသွားပြီ။
မျောက်တွေက အုန်းသီးကို ကိုင်ထားရင်း ငါ့ဥစ္စာကွလို့ပြောတယ်။ ဂုဏ်ယူပုံလည်းရတယ်။
မျောက်တွေဟာ မွေးထားသူတွေကို ပြန်ခြောက်ဖို့ဝါသနာပါတယ်။
မျောက်တွေကို မျောက်မြီးနဲ့မျောက်ချည်လုပ်ရင်လည်း ရူးသွားလိမ့်မယ်။ မရတော့ဘူး။
မျောက်သားစားချင်ရင် မျောက်မျက်နှာမကြည့်ရဘူးဆိုတာ သေးသိမ်တဲ့ လူတွေပြောတာပါလို့ မျောက်က တရားကျသလိုပြောတယ်။
မျောက်တွေကမျောက် ဋီကာ ရေးသွားတဲ့ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကိုတောင် သူတို့ကျေးဇူးမကင်းဘူးပြောတတ်တယ်။
"အ၀တ်ဝတ်ထားတဲ့ ပရိုင်းမိတ်တွေဟာ သိပ်ကို ကိစ္စများတာပဲ" လို့ သူတို့အချင်းချင်း တစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစပြောတာကလွဲရင် သိပ်ကို တည်ငြိမ်တယ်။
.... မကြာခင်မှာ ဖတ်ရှုရမယ့်သတင်းစာမှာတော့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း တိုင်းသူပြည်သားများ ပျော်ရွှင်စွာရေကစားလျက်ရှိကြောင်း ဆိုတာပါပဲ ...။ ... သီတာကြည်လဲ့ ငှက်သံနွဲ့နှင့် လွမ်းဖွဲ့မြိုင်ခြေ မြူခိုးဝေနေတဲ့ တောအုပ်လေးမှာလည်း မျောက်တွေ တကယ်ပျော်ရွှင်စွာ ... ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြလျက်ရှိနေကြောင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ များက နှစ်နှစ်ဆယ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့သော အတွေ့အကြုံအရ မှန်းဆလျက်ရှိနေ။ ။
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ .....။
Thanks to my censorship board for frequent warnings .... :).
Thanks to my English teacher who introduced me with satire books.
We don't care who governs the country, but we care how they govern ...(Zephyr)